Home Wararka Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka amar qaata Villa Somalia oo la...
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka amar qaata Villa Somalia oo la wareegay Baydhabo
Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia oo ka amar qaata MW. Farmaajo ay la wareegeen amaanka magaalada oo maalinta beri ah doorasho ay ka dhaceyso.
Ciidamada Ethiopia oo aan qeyb ka ahayn AMISOM ayaa la wareegay amaanka waddooyinka waaweyn ee magaalada iyo xarumaha dowladda ee ku yaala magaalada Baydhabo, si ay amaanka u adkeeyaan.
Doorashada madaxweynaha Koofur Galbeed oo dhowr mar horey u baaqatay ayaa maalinta beri ah la filayaa inay ka dhacdo magaalada Baydhabo, waxaana ku tartamaya shan Musharax.
Ciidamada Ethiopia ayaa sidoo kale caawa lagu arkayaa goobaha laga galo magaalada, waxaana sidoo kale wehlinaya ciidamada booliska Koofur Galbeed iyo ciidamadii dhawaan la geeyay magaalada.
Adkeynta amaanka Baydhabo ayaa looga gol leeyahay in looga hortago weeraro Al Shabaab ay ku carqaladeyn karaan doorashada Koofur Galbeed, maadaama horey maamulka ay u sheegeen inay ka helen xogo ku saabsan weerarada Al Shabaab.
Maalintii shalay waxaa lasoo gabo gabeeyay dhageysiga khudbadaha musharixiinta ay kaga hadlayaan waxqabadkooda marka la doorto ay la imaanayaan.
Previous articleSheekh Soomow “Madaxweynuhu Baarlamaanka ha tago, hana gar baxo,
Next articleMusharax Adan Saransoor oo xabsi guri laga dhigay kaddib markii uu diiday codsi uga yimid Villa Somalia (Deg Deg)
Raisal Wasaare Khayre oo Sagootiyay Cutubyo ka tirsan CXDS oo loodirayo...
Shaki kusoo badanaya shacabka in DF ay heshiis hoose la gashay...